Erdogan: Turkiga waxaa uu ka daalay xubinimada Midowga Yurub – Radio Daljir
Janaayo 6, 2018 7:22 b 0
Madaxwaynaha Turkiga Recep Tayyib Erdogan ayaa sheegay xukuumadda Ankara inay ka daashay ka mid noqoshada xubinimada dalalka Midowga Yurug, isagoona xusay inaanay jirin wax shaki gelinaya oo diidan fulinta codsigeeda.
Hadalkiisa ayaa yimid, isagoo ku guda jira booqasho uu ku jooga dalka France isagoo kula kulmay dhigiisa dalkaasi Emmanuel Macron.
“Masii awadi doono codsiga aan uga mid noqonayno Midowga Yurub” ayuu yiri Erdogan oo uu dhinac taagnaa madaxwaynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ay si wadajir ah u wada qabteen shir saxaafadeed.
Waxaa uu eedeeyey qorshaha diidan inay ka mid noqdaan dalalka Midowga Yurub, isagoona sheegay inay muddo badan ay albaabka ay u fadhiyeen.
Turkiga ayaa codsaday inuu ka mid noqdo bulshada dhaqaalaha ee wadamada Yurub 1987dii, hase ahaatee waxaa loo tixgaliyay inay ku haboontahay xubinimada Midowga Yurub 1997dii, balse sanadkii 2015kii ayay bilowdeen wada xaajoodyo arrintaasi lagu dhaqan gelinayo, inkastoo aan wax hormar ah laga samayn.
“Markii aan waydiino sababta, Midowga Yurub nooma sheegayaan , waxaana ay na hordhigayeen 15 ka mid ah siyaasadda Midowga Yurub u degsan, waxaana cuntubyada anaga na quseeyo ay ku kordhiyeen ilaa 35” ayuu yiri Erdogan.
Madaxwaynaha Turkiga ayaa sheegay si’ ay uga mid noqdaan dalalka xubnaha ka ah Midowga Yurub inay ku guulsanayaan inay soo gabagabeeyaan wada xaajoodyada 35-ka cutub ee siyaasadda Midowga Yurub, taasi oo ku lug leh isbadalo iyo inay dabaqaan hanaanka Midowga Yurub.
Dowladaha Midowga Yurub ayaa ku eedeeyey dowlada Ankara inay xirxirtay tobanaan kun oo mucaarkeeda ah, iyadoo ka faa’iidaysanaya inqilaabkii fashilmay ee July 2016 ee kadhacay dalkaaasi, dowladda ayaa isaga fogaysay inay mucaaradka ay beegsatay waxa la beegsanayay ay ahaayeen taageerayaasha wadaadka musaafuriska ugu nool Mareykanka ee Fathulah Gullen oo Turkiga uu ku eedeeyey inuu ka dambeeyey afgambiga fashilmay ee dalkaasi.
Mareykanka oo liiska argagaxisada ku daray hogaamiye kuxigeenka Al-shabaab